रहस्यमै सानेपा घटना: विजयले किन गरे मुनाको हत्या ? - हाम्रो देश
रहस्यमै सानेपा घटना: विजयले किन गरे मुनाको हत्या ?
काठमाडाैं । बिहान १० बजेर ८ मिनेट। सानेपास्थित घरमा कसैले पछाडिबाट मुना कार्कीको घाँटी बेर्छ, घाँटी कस्सिन्छ। उनलाई लडाइन्छ, अनि घाँटी थिचिन्छ। लगत्तै टाउकामा प्लास्टिकको पिर्काले प्रहार हुन्छ।
पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीले ललितपुर महानगरपालिका २ सानेपास्थित घरको सीसी क्यामेरामा यस्तै दृश्य कैद भएको भिडियो प्राप्त भएको प्रहरीको दाबी छ । ७/८ महिनाअघि घरमा चोरी भएपछि कार्कीले चारवटा सीसी क्यामेरा इन्स्टल गरेका थिए।
त्यसैमध्ये एउटा खुला झ्यालबाट कैद भएको फुटेजमा कार्कीकी पत्नी मुनाको हत्या भएको देखिएको छ। दृश्य हेर्दा मुनालाई आक्रमण गर्ने व्यक्ति घरमा काम गर्ने विजय चौधरी देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
‘हामीले एम्बुलेन्स पठायौं । तत्काल बिरामीलाई गर्नुपर्ने सबै क्लिनिकल प्रक्रिया सुरु गर्यौं,’ स्टार हस्पिटलका सीईओ डा. सन्देश जीसी भन्छन्, तर
सोमबार बिहानै आफैं गाडी हाँकेर रुद्री पूजाका लागि पुशपति पुगेका थिए। उनकी ४९ वर्षीया श्रीमती मुना र कामदार विजय चौधरी भने घरमै थिए। पूजा सकेर घर फर्की गेट खोल्न आग्रह गर्दा कसैले नखोलेपछि आफैं भित्र पसेका थिए। भित्र पस्ने बित्तिकै श्रीमती किचनमा रक्ताम्य भएर ढलिरहेको अवस्थामा अचेत थिइन्। दाङ देउखुरीका २२ वर्षीय विजय लिभिङ रुममा हरियो नाइलनको डोरीमा कस्सिएर मृत अवस्थामा थिए।
प्रहरीका अनुसार त्यसपछि छिमेकीमध्ये कसैले प्रहरी वृत्त सानेपामा फोन गरेर घटनाबारे जानकारी गराएका थिए। प्रहरीले तत्काल त्यहाँ पुगेर अचेत मुनालाई एम्बुलेन्स बोलाएर स्टार हस्पिटल पठाएको थियो।
‘हामीले एम्बुलेन्स पठायौं। तत्काल बिरामीलाई गर्नुपर्ने सबै क्लिनिकल प्रक्रिया सुरु गर्यौं,’ स्टार हस्पिटलका सीईओ डा. सन्देश जीसी भन्छन्, ‘तर उहाँलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याउँदा नै मृत्यु भइसकेको थियो।’
तर मार्ने र मर्ने दुवै नभएकाले भित्री कारण पत्ता लगाउने प्रयास हामीले गरिरहको छौं,’ तामाङले थपे, ‘तर भिडयो हेर्दा रिस नै थियो भन्ने देखिन्छ।
अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट घरमै कुनै विषयमा वादविवाद भएपछि विजयले नै मुनालाई आक्रमण गरेको हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ। ‘विजयले नै मारेको देखिन्छ,’ ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता सन्तोष तामाङले बुधबार बिहान भने, ‘पहिले डोरीले पछाडिबाट घाँटी कसेको र पछि प्लास्टिकको पिर्काले प्रहार गरेको भिडियो फुटेजमा देखिन्छ।’
उनका अनुसार मुनाको मृत्यु ट्रिबुलेसन (निस्सासिएर) भएको देखिएको छ। ‘विजयले हत्यापछि आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
हत्या पछि आफैं झुन्डेर मरेकामा पनि विवाद छैन तर मार्ने र मर्ने दुवै नभएकाले भित्री कारण पत्ता लगाउने प्रयास हामीले गरिरहको छौं,’ तामाङले थपे, ‘तर भिडयो हेर्दा रिस नै थियो भन्ने देखिन्छ।’ विजयको मृत्युको कारण पनि ‘ह्यागिङ’ नै देखिएको उनले बताए, साप्ताहिकले खबर छापेको छ।
‘मर्ने र मार्ने’ दुवै नरहेका कारण घटनाको आन्तरिक ‘मोटिभ’ बारे प्रहरीले अझै अनुसन्धान जारी राखेको छ। घटनाको कारण अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ।
अहिलेकाे सरकारसँग जनताले तीब्र विकासकाे आशा गरेको छ : प्रधानमन्त्री ओली (पूर्णपाठसहित)
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालपनको संरक्षण, युवा अवस्थामा रोजगारी र बृद्ध अवस्थामा सुरक्षा भएको समाजलाई मात्रै वास्ताविक लोकतन्त्र ठान्ने बताउनुभएकाे छ । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आज प्रतिनिधिसभामा सम्बाेधन गर्नुहुँदै उहाँले साे कुरा बताउनुभएकाे हाे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तारै लाेकतन्त्र महशुस हुँदै गएकाे पनि बताउनुभयाे । ‘हाम्रोमा लाेकतन्त्र विस्तार हुँदै छ, म त्यस्तो लोकतन्त्रलाई मान्छु, जहाँ हरेक नागरिकको शिक्षा र स्वाथ्यको सुनिश्चिता होस्,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘बालपनको संरक्षण, युवा अवस्थामा रोजगारी र बृद्ध अवस्थामा सुरक्षा भएको समाज व्यवस्था होस् ।’
सबै नागरिकलाई न्याय र समानता र मर्यादा सहितको लोकतन्त्र मात्र वास्तविक लोकतन्त्र मान्ने पनि उहाँले बताउनुभयाे । पहिलाे वर्ष प्रतिनिधिसभामा सम्वोधन गर्दा विराेध भएर गर्न नपाएकाे सम्झनुहुँदै भन्नुभयाे, ‘पहिलाे वर्ष विराेधका कारण सम्बाेधन गर्न पाइन, सदन बाहिर नै सम्बाेधन गर्नु परेकाे थियाे, दाेस्राे वर्ष सदनमै बोल्ने वातावरण बनेको छ, खुशी लागेको छ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
७/८ महिनामै सरकार फेरिरहने अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा दुई वर्षसम्म एउटै सरकार रहनु पनि उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने अवस्था भएको प्रधानमन्त्री ओली बताउनुभयाे । अघिल्लो वर्ष मैले आधार वर्ष भएको बताएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयाे, ‘दोस्रो वर्षलाई विकासको आधार वर्षको रुपमा लिएको छु।’
पहिलाे वर्ष आधार वर्ष र दाेस्राे वर्ष विकासको आधारको वर्ष बनेकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे । ‘याे वर्ष हामीले विकासकाे आधार खडा गरेको छौँ, पाँच वर्षसम्म हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
संघीयताको नयाँ संरचनाको सहज सञ्चालनका लागि आफूले काम गरेको दाबी गर्नुभयाे । उहाँले दोस्रो वर्षमा ५५ नयाँ कानुन निर्माण भएको र २०१ वटा ऐन संशोधन भएको र मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएकाे पनि बताउनुभयाे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेकाे सरकारसँग जनताले तीब्र विकासकाे आशा गरेकोसमेत बताउनुभयो ।
सरकार सञ्चालनको २ बर्ष पूरा भएको विशेष सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
प्रतिनिधि सभामा गर्नुभएको सम्बोधनकाे पूर्णपाठ
– गतसाल यसैगरी बर्षभरिका कामको प्रतिवेदन यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउने प्रयास गरेको थिएँ । कारणमा जान चाहन्नँ, तर संसद चलिरहेको बेला यसै गरिमामय सदनले अत्यधिक मतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले, आपूmलाई निर्वाचित गर्ने निकायलाई उसले गरेका कामको जानकारी गराउन पाएन । मैले सिंहदरबार परिसरभित्र सार्वजनिक समारोहबीच ३६५ दिनमा सरकारका तर्फबाट भए÷गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरेको थिए ।
¬ यसपटक पनि मैले हिजो यस सम्मानीत सदनमा मेरो सम्बोधनको कार्यक्रम तय भएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको असामयिक र दुःखद् निधनका कारण स्थगित भयो । म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना ब्यक्त गर्दछु ।
– यसो भनिरहँदा म, अल्पअवधिको सरकार र पूरा अवधिको सरकारले गर्ने कामका तरिकाको बारेमा देशबासीलाई जानकारी गराउँदै थिएँ । आप्mनै आयु र भविष्यको टुङ्गो नभएको कमजोर जगमा उभिएको सरकारले गर्ने काम र बलियो जगमा पूरा अवधिको जनादेशसहित गठन भएको सरकारले गर्ने कामका तौरतरिकाको भिन्नताका बारेमा जानकारी गराउँदै थिए ।
– कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रुपमा ‘केही लोक–रिभ्mयाँइका विषय र केही आपूmले गर्न चाहेको ‘इच्छा–पत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आपूmलाई केन्द्रित गर्छ । तर बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै थिए।
– अखबारमा पढेथें, आम निर्वाचन ताका मेरो दलको विपक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएका एकजना नेताले नेकपाको सरकार बन्यो भने हाँस्न त के रुन पनि पाइदैंन भन्दै भोट माग्नु भयो । अलि समय उहाँका समर्थकहरुले त्यसैलाई दोह¥याएको सुनियो । उहाँको दललाई जनताले कति पत्याए परिणामले बतायो ।
एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालको लोकतन्त्र संकुचनतिर’ भन्नु भयो । त्यसपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको एकतारे पट्यारै लाग्ने गरी बर्षैभरी बज्यो । त्यो एकतारे कहिले माइतिघर–मण्डलामा घन्कियो, कहिले ‘गुठी विधेययक’को अवतारमा उफ्रियो । पछिल्लो समय मिडिया विधेयकको रुपमा पनि चर्चामा आयो, जुन विधेयकका विरुद्ध धेरै ‘बाइट’ खर्च भए, त्यही विधेयक राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पास ग¥यो ।
– यसको अर्थ, हामीले श्रम वजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौ भन्ने हो । हाम्रो श्रम बजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलार्ई नयाँ रोजगारीले भेट्ने भेट्ने स्थितिमा छ । श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोेजगारले काम नपाएका होलान,् तर नयाँ वेरोजगार थपिएका छैनन् । अहिले बेरोजगारहरुको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयले संकलन गर्दैछ । विकास निमार्णकोे काममा श्रमिक अभावको स्थिति छ । यसको मतलब हो, आधारभूत तहमा रोजगारीका समस्याहरु क्रमशः हल हुँदै गएका छन् ।
– जलस्रोतको धनी तथा दक्षिण एशियामा विजुली उत्पदन गर्ने पहिलो मुलुक हुँदाहुँदै झण्डै सय बर्षसम्म बिजुलीको हाम्रो कूल उत्पादन ५०० मेगावाटभन्दा तलै सीमित थियो । केही समय अघिसम्म हामी दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य थियौं । अहिले विद्युतको कूल जडित क्षमता १ हजार २८६.६१ मेगावाट पुगको छ । यससँगै लोडसेडिङ्गको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत बिक्रीसमेत गर्न थालिएको छ ।
निकट भविष्यमा नेपाली बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतिर निर्यात गर्न आधार तयार भएको छ । बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ । २२.९ प्रतिशतमा रहेको विद्युत चुहावटलाई १५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । दियालो÷दियो हुँदै मट्टितेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य नै हुँदैछ ।
– मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसंग संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेर संचालनमा आएपछि विद्युत आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ ।
अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच बर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ ।
– भरखरै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सरकार पक्षीय दलहरुले सम्पूर्ण १८ सीट जिते । यसपछि अब संघीय संसदमा सरकारसँग एक्लै स्पष्ट दुईतिहाई बहुमत कायम हुनपुगेको छ । कोहीले भन्नु होला, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले नयाँ होइन विद्यमान पुरानै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
यसलाई सही मापन नमान्ने हो भने उप–निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतले त तथ्य बोल्छ होला नि ! सरकारतिरको नकारात्मक बुँदाबाट थालौं– यस उपनिर्वाचनमा केही स्थानमा सरकार पक्षधरहरुले हारे, केही स्थानमा सरकारको विपक्षमा रहेकाहरु पनि विजयी भए । समग्रमा सीट र मतसंख्यामा बढोत्तरी सरकारकै पक्षमा आयो । यो इम्प्रेसन हो र तथ्य पनि । तथ्यले भन्छ– सतर्कतापूर्वक जनताले सरकारकै पक्षमा भोट हाले । भयो ?
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा प्रारम्भ गरिएको छ । यस योजनामा सूचीकृत रोजगारदाताको संख्या १२ हजार १ सय ५५ र सूचीकृत श्रमिकको संख्या १ लाख ४८ हजार १ सय १ पुगेको छ। यही संख्यालाई लिएर ‘सरकारले नयाँ युगको शुरुवात भन्दै थालेको यस योजनामा योगदानकर्ताको व्यापक अनिच्छा’ जस्ता प्रचारप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
आयकरको सिलिङ्गका कारण कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तामा रहेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्न हालै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले आयकर प्रयोजनकालागि आफ्नो आयबाट घटाउन पाउने रकमको सीमा रु. ३ लाखबाट बढाई रु. ५ लाख कायम गरेको छ । सबै प्रकारका रोजगारीमा संलग्नहरुको भविष्यसंग जोडिएको र मुलुकलाई कल्याणकारी राज्यमा रुपान्तरण गर्ने यस युगान्तकारी कार्यक्रमलाई आम श्रमजीवी वर्गको तहमा विस्तार गर्न जरुरी छ । यस योजनाले काम गर्ने र काम गराउने दुबै पक्षलाई उत्तिकै लाभ पु¥याउँछ । श्रम सम्बन्धलाई उद्यम÷व्यवसाय मैत्री बनाउँछ । तसर्थ, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकहरुलाई यस अभियानमा ढिलो नगरी सूचीकृत हुन म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु ।
– सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कारबाही अन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमिनहरु फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ । सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २३४ विघा र बर्दियाको ४६ विघा जग्गा यसप्रसंगमा उल्लेखनीय छन् । माथिल्लो त्रिशुली–एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँचमार्गका लागि सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा मैले सत्ताको जिम्मेवारी लिनु केही दिन अघि मात्र नक्कली मोही खडा गरी तिनका नाममा दर्ता गरिएको ११० रोपनी जग्गा हालै खारेज गरी फिर्ता गराइएको छ ।
– यस्तो पनि सुनेको छु– यो सरकारले खोई के नै नयाँ काम ग¥यो र ? पुरानैको लिपापोती न हो । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । विरासतमा प्राप्त तमाम बेथितिलाई ठीक गर्ने र अपुरा अधुरा काम पनि पुरा गर्ने यसकै दायित्व भित्र पर्छ । मैले वेथितिलाई ठीक गर्न सरकाकरले चालेका कदमहरु र अधुरा अपरा कामलाई समयमै सक्न थालिएका प्रयासको बारेमा यस अघि नै चर्चा गरी सकेको छु ।
सङ्क्षेपमा भावी कामको मार्गचित्र पनि उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छुः
– मैले भनिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन, नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अभिरुचि पनि बढेको छ । मैले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण दुई दशकपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको हुँ । १७ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भ्रमण सम्पन्न भएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक भ्रमण भएको छ । यस्ता कुराहरुले हाम्रो सम्बन्धको विस्तारलाई बढाएको स्पष्ट देखाउँछन् । पहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरु मध्ये एसिया सोसाइटीमा मात्रै सीमित देखिन्थ्यौं । अहिले एसिया सोसाइटीका अतिरिक्त डावोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्र संघीय शान्ति विश्वविद्यालयजस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरुमा हामीले विचार प्रस्तुत गरेका छौं ।
– मैले एउटा कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा भनेको थिएँ– सरकारले शुरु गरेका कामहरु अहिले नै फुलिसके÷फलिसके भन्ने होइन । बिरुवा रोप्ने काम भएको छ । कतै उम्रिदै छन्, कतै टुसाउँदै छन्, कतै बिरुवा हुर्किंदै पनि छन् । सबै एकैचोटि त हुँदैन । भनाइ नै छ नि– ‘रोम वाज नट बिल्ट इन वान् डे’ । एकै दिनमा त रोम पनि बनेको थिएन ।
– पूँजीगत खर्चमा सुधार भएन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने जस्ता टिप्पणी प्रति मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ । खर्च कम हुनुका थुप्रै कारणहरु छन् र तिनको समाधानको प्रयास पनि जारी छन् । ठूला ७० वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा भैसकेका कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम हुन गएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै बील पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्यादथपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नु जस्ता प्रमुख कारण देखिएका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका ३६८ ठेक्का मध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ । खानेपानी मन्त्रालय तर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्का मध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पूल गरी करीब ६ अर्ब बैदेशिक स्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी भएको छैन ।
– क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटी पूँजीगत खर्च कम हुनमा कारण देखिन्छ । शहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्व ३९ अर्ब ४७ करोड (२३,९४७ करोड) अर्थात् ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । अझ खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटीरहेका छन् ।
मैले पहिले नै चर्चा गरी सकेको छु, सरकारले विरासतमा पाएको यस्ता कैयौं वेथितिलाई अहिले सच्याउँदैछ । अधुरा अपुरा कामलाई सम्पन्न गर्दैछ । यसका लागि सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा सुधार गरी विभिन्न कारणले अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको छ । यसले अधुरा आयोजना लाई सम्पन्न गराउन र समग्रमा पूँजीगत खर्च बृद्धि हुन सहयोग पु¥याउने छ ।
– यस सम्मानित सदनलाई अवगत होस्, सरकार निष्ठापूर्वक आप्mनो काममा कटिबद्ध, प्रतिबद्ध र दृढ छ । जनतासामू गरिएका कबुलहरु पूरा गर्न र यस सदनले मप्रति देखाएको विश्वास अक्षुण्ण राख्न मेरो निरन्तरको प्रयास जारी छ । खासमा जनताले सुम्पेको यो विश्वास र भरोसाको नासो हो । यसलाई सदैव शिरोपर गरेर सार्वभौम जनताको आकांक्षाअनुरुप निर्धारित राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न मेरो सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।
संसद भवन, नयाँ बानेश्वर